3050-4000mAh Factory, mpamatsy - mpanamboatra China 3050-4000mAh
Tombo-peo 3.7V 4000mAh 606090 azo alika bateria li-po azo ampiasaina ho an'ny Bluetooth Speaker, kilalao, banky herinaratra
Ny bateria PLM-606090 3.7V 4000mAh azo ampiasaina indray dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-po Battery K86 3400mAh 3.7V Fitaovana finday ho an'ny Speaker Bluetooth, kilalao, roboto elektronika, finday, POS, Printer Mini Mini Printer
Ny batterie PLM-K86 3.7V 3400mAh dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-po Battery 36-DC3800MA 3800mAh 4.2V Batterie finday ho an'ny Speaker Bluetooth, kilalao, robok elektronika, POS
Ny batterie PLM-36-DC3800MA 4.2V 3800mAh dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fahaiza-manao avo indrindra ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Li-po Battery 964674 3.7V 4000mAh Batteran'ny sela finday ho an'ny Speaker Bluetooth, kilalao, banky herinaratra
Ny batterie PLM-964674 3.7V 4000mAh dia mampiasa fitaovana tsara indrindra miaraka amin'ny fatrany avo indrindra mety ho an'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Rindrambaiko roa M2 3.8V 4000mAh Polymer Lithium Battery Pack famatrarana bateria azo averina ho an'ny Micro Talk Radio, Masinina mipoaka.
Ny bateria PLM-M2 3.8V 4000mAh azo averina ampiasaina dia mampiasa fitaovana tsara indrindra misy fahaiza-manao avo lenta azon'ny mpanjifa mahazatra. Ny baiko OEM / ODM Custom dia ankasitrahana amin'ny fampiharana samihafa, ny orinasanay manarona ny tsenan'i Eropa, Azia ary Amerika. Manantena izahay fa ho lasa mpiara-miasa maharitra any Shina ianao.
Detail amin'ny vokatra: Fampiharana: Lalao, Fitaovana an-trano, marika elektronika ho an'ny mpanjifa: Fahazoan-dàlana PLM: Nomeran'ny modely MSDS: PLM- 805080 Toerana niaviany: Guangdong, China Weight: 45g / PC Karazan-jiro: PCg Batter polibera azo zahana: 7,4V Fahaiza-manao: 4000mAh Haben'ny bateria: 8.0mm * 50mm * 80mm Warranty: 12 volana Fampiasana: Bluetooth mpandahateny, kilalao, vokatra elektronika, banky herinaratra fiainana Cycle: 1000Time Taham-pandefasana: 4.0A Package: boaty tsirairay fonosana fiarovana maro: ： 1.Dual MOS p .. .
Detail amin'ny vokatra: Fampiharana: Lalao, Fitaovana an-trano, marika elektronika ho an'ny mpanjifa: Fahazoan-dàlana PLM: Nomeran'ny modely MSDS: PLM- 102662 Toerana niaviany: Guangdong, China lanjan-jiro: 75g / PC Karazan-jiro: PCg Batterie vita amin'ny marika azo ampiasaina: 3.7V Fahaiza-manao: 3200mAh Vataben'ny bateria: 10mm * 26mm * 62mm Warranty: 12 volana Fampiasana: fitenenana blôgy, kilalao, POS, fakan-tsary miakatra: 1000Times Fahafahana: 3.2A fonosana: fonosana boaty isam-batan'olona: 1.Dual MOS octagonal board 2.Sho. ..